धेरै मासु भन्दा यसको स्वाद लागि खरायो मासु आहार पकवान। यो बच्चाहरु, पुराना मान्छे र पातलो को आहार मा समावेश गर्न सिफारिस गरिएको छ। खरायो बहुमूल्य धनी प्रोटिन, मांसपेशी तन्तु खेलाडीहरूलाई निर्माण गर्न आवश्यक छ। र यो सबै आफ्नो उपयोगी गुण छैन।
खरायो मासु: लाभ र हानि, ताप र पोषण मूल्य
खरायो मासु सेतो प्रजातिहरू पर्छ। यो एक, कोमल नरम र रसदार छ। कारण उत्पादन को कम गरमी सामाग्री एक आहार मानिन्छ। को पोषण गुणहरू खरायो व्यापक उच्च चिकन, मासु र पोर्क अनुसार।
खरायोको मासु को संरचना अनुसार 85% अन्य ग्रेड भन्दा एकदम अधिक छ, जो मांसपेशी तन्तु, को हुन्छन्। 9-10% भन्दा कुनै खरायो को बोसो सामग्री। यो बोसो nutritionists पनि उपयोगी द्वारा मानिन्छ।
खरायोको मासु गरमी सामाग्री प्रोटिनको मात्र 183 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम रकम छ - 21.2 ग्राम, र यो चिकन स्तन मा निहित रूपमा लगभग एउटै छ। प्रति 100 ग्राम खरायो मासु बोसो को वजन छ 11 जी, पानी - लगभग 67 G खरायो, चिकन र अन्य प्रजातिहरू, लगभग पूर्ण पचा लिया जान्छ (90%) विपरीत।।
यो आहार मासु महत्त्वपूर्ण भिटामिन र खनिज समावेश गर्दछ। धन्यवाद तिनीहरूलाई, मासु खरायो उच्चतम पोषण मूल्य हुन्छ। यो यस्तो पोटासियम, सल्फर, फस्फोरस, क्लोरिन, सोडियम, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम रूपमा macronutrients समावेश गर्यो। नोकसान पुग्छ जो र लाभ कारक को एक नम्बर द्वारा निर्धारित छन् खरायो मासु, महत्त्वपूर्ण ट्रेस तत्व को स्रोत हो। विशेष गरी मूल्यवान फलाम, जस्ता, मैंगनीज, आयोडिन र अरूलाई सहित मानिन्छ।
खरायो अन्य चिरपरिचित प्रजातिहरू अगाडी मासु लाभकारी गुण अनुसार। यो मुख्यतः खरायो मा निहित छन् भिटामिन र खनिज को अद्वितीय नम्बर निर्धारण गरिन्छ।
खरायो मासु, क्षति र जो nutritionists नियन्त्रण गर्दै प्रयोग, अन्य प्रजातिहरू तुलनामा नाइट्रोजन यौगिकों को एक न्यूनतम राशि, समावेश छन्। खरायो को सानो मात्रा गाउट संग विरामीहरु पनि खान अनुमति किन छ।
यो उत्पादन बोसो र कोलेस्ट्रल को एक सानो रकम समावेश गर्छ, त्यसैले यो आहार र चयापचय, अल्सर, gastritis र पेट र intestines अन्य रोगहरु को normalization लागि सिफारिस गरिएको छ।
खरायो - सजिलै शरीर द्वारा अवशोषित छ hypoallergenic मासु। यो एक वर्ष पछि आमा र बच्चाहरु lactating लागि प्रोटिनको एक आदर्श स्रोत हो। को खरायो मासु एंटीओक्सिडेंट समावेश गर्छ, त्यसैले यो क्यान्सर को रोकथाम लागि प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसलाई मा खरायो मासु विकिरण प्राप्त को खुराक कम गर्न सक्छ कि पदार्थ समावेश साबित भएको छ। यो रसायन चिकित्सा undergo गर्ने मान्छे को आहार मा समावेश गर्न सिफारिस गरिएको छ।
किनभने यो एन्टिबायोटिक र वृद्धि हर्मोन संग "भरी" छ विशेष गरी उपयोगी मानिन्छ खरायो मासु, सात महिना को उमेर हासिल गरेको छैन। कि यो साँच्चै भिटामिन, माइक्रो र म्याक्रो अधिकतम रकम सँग, प्राकृतिक आहार खरायो मासु छ, छ।
खरायो मासु प्रयोगको लागि भनेर लगभग कुनै contraindications अनुपम छ। अझै पनि, यो यस्तो गठिया, गाउट रूपमा केही चिकित्सा अवस्था, संग मान्छे को लागि आफ्नो आहार समावेश गर्न आवश्यक छ। यो कारण पनि खरायो मा सहित कुनै पनि मासु मा निहित प्यूरिन आधारमा, छन्। जब ingested, तिनीहरूले यूरिक एसिड परिवर्तन गरिन्छ, जोडों र tendons को काम मा नकारात्मक प्रभाव छ।
खरायो मासु, हानि र लाभ यो सम्भव सबै मानिसहरूलाई ठिक्क यसलाई प्रयोग बनाउन जो एक मूल्यवान आहार उत्पादन हो। यो वयस्क र बच्चाहरु को आहार मा समावेश गर्न अनुमति दिएको छ, कुनै महत्वपूर्ण contraindications छ।
खरायो मासु: लाभ र हानि। ताजा खरायो कसरी चयन गर्ने?
खरायो मासु गडबड गर्न गाह्रो छ। यो stewed मा स्वादिष्ट र बच्चाहरु र वयस्क, पहिलो रुचाउने बच्चाहरु को लागि खरायो प्रयोग आफ्नो सूप देखि पोलेको छ। मसालेदार स्वाद यो सुकेका फल (किसमिस, छाँट्दछ), मह, साग, गाजर दिन्छ। निस्सन्देह, स्वादिष्ट व्यञ्जन यदि चयन ताजा खरायो मासु, प्राप्त छन्। यसको लाभ र हानि nutritionists छलफल, तपाईं पनि वजन हानि भने उत्पादन प्रयोग गर्न अनुमति छ।
किन्न मासु बजार मा र पसलमा दुवै हुन सक्छ। कुनै पनि मामला मा, उच्च गुणस्तरीय खरायो मापदण्ड को विकल्प नै रहने:
मासु को रंग अलिकति गुलाबी tinge संग, सेतो हुनुपर्छ। ताजा खरायो फरक घनत्व र लोचदार संरचना।
गंध ताजा उत्पादन कुनै पनि ताजा मासु लागि व्यावहारिक अनुपस्थित वा बल्लतल्ल detectable विशेषता छ। घास को खरायो बलियो गन्ध भने, यो पुरानो हो भन्नुभयो छ। यस्तो देखि खरीद छुँदै नछुने राम्रो छ।
गर्नुपर्छ खुट्टा ध्यान: कम्तीमा तिनीहरूलाई को एक फर संग रहनुपर्छ। अक्सर बिरालो खरायो लास बिक्री को कूटवेश अन्तर्गत बेईमान विक्रेता।
स्थिर मासु खरीद गर्दा प्याकेजिङ्ग ध्यान गर्नुपर्छ। सबै को सबै भन्दा राम्रो, यदि यो एक निर्वात छ। मासु bruising बिना उज्यालो गुलाबी हुन, यसको प्राकृतिक रंग कायम गर्नुपर्छ।
खरायोको मासु, पकाने प्रक्रियामा भण्डारण गरिएका लाभ र हानि, soaking हटाउनेछ प्राप्त गर्छ जो एक विशिष्ट स्वाद, छ। यो खरायो पानी मा3घण्टा डूबा लागि, र त्यसपछि मात्र तैयार, नुस्खा अनुसार थाल्छन्।
दही मा खरायो लागि नुस्खा
त्यहाँ धेरै छन् खरायो व्यञ्जनहरु। दही मा बुझाने भने तर सबैभन्दा यसको मासु नाजुक प्राप्त छ।
लगभग 1 किलो, वजन खरायो आधा शवों, अंश मा कटौती गर्न धुन र ड्राई। त्यसपछि नुन र मरिच र कागति को रस संग भिजेको संग सिजन। त्यसपछि खरायो सुनको खैरो सम्म वनस्पति तेल मा तला। पैन देखि मासु हटाउने छैन, यो पूर्ण पानी वा शोरबा र स्ट्यु संग बिस्तारै बारेमा 1 घण्टा भर्न। निर्धारित समय पछि दही को 200 एमएल र सुक्खा तुलसी को एक चम्मच थप्नुहोस्। अर्को 15 मिनेट Simmer। थप पकाउने को अन्त मा कटा लसुन (1-2 दाँत।), गर्मी बन्द र 10 मिनेट को लागि खडा गरौं। त्यसपछि, पकवान तालिका सेवा गर्न सकिन्छ।
राम्रो र हानि छ जो यस नुस्खा खरायो मासु लागि तयार, nutritionists अनुसार, छैन तुलना गर्दै छन्, यो कोमल र रसदार बाहिर जान्छ। यो आहार तालिकाको लागि भोजन तयार गर्न एक उत्कृष्ट, सजिलो छ।
multivarka मा छाँट्दछ संग खरायो
पकवान एक खरायो खाना पकाउने गर्दा अक्सर यो एक स्वादिष्ट स्वाद दिन सुकेको फल थप्नुहोस्। तर पहिले, मासु बारेमा एक घण्टा न्यानो पानी मा भिगो गर्नुपर्छ।
रूपमा प्रस्तुत निर्धारण खरायो मासु, क्षति र जो को प्रयोग अपरिवर्तित, तयारीको विधि बिना रहन धेरै रसदार, र पैन को दमन मा भन्दा नरम।
पहिलो, एक खरायो मा लागि लगभग 30 मिनेट "सेक्ने" मोड मा multivarka तलना गर्नु पर्दैन। त्यसपछि आधा छल्ले मा कटौती मासु र गाजर, गर्न प्याज थप्नुहोस्। त्यसपछि क्रीम, चम्मच टमाटर पेस्ट2चमचा राख्नु र 1.5 घण्टा simmer, माथि पानी खन्याउन। पकाउने को समाप्तिमा लसुन र छाँट्दछ को चोट ल्वाड़ थप्न। पकवान तयार छ, खानपान!
संशोधित स्टार्च - यो के हो?
कार्य को अचाक्ली - परिसर बारेमा सरल भाषा
इस्पात को एक ग्रेड कसरी पढ्न
Salvatore vermouth, vermouth र अन्य Santanelli रूसी उत्पादन के हो?
वासुलर मालफूल: कारण, लक्षण, निदान, र उपचार विधि
रूसी भाषामा बोल्ने प्रकारहरू। प्रकार र भाषणको शैली